ESI GBANWEE ADREESỊ MAC NA RAWỤTA (CLONING, MAC EMULATOR) - NETWORK NA INTANETI - 2019
Ọtụtụ ndị ọrụ, mgbe ị na-etinye ihe ntanetị n'ụlọ, inye ngwaọrụ niile na netwọk na netwọk mpaghara, na-eche otu okwu ahụ - nchịkọta adreesị MAC. Eziokwu bụ na ụfọdụ ndị na-enye ọrụ, maka mgbakwunye nchebe ọzọ, denye aha MAC nke kaadị netwọk gị mgbe ị banyere nkwekọrịta maka ịnye gị ọrụ. Ya mere, mgbe ị jikọtara onye na-enye ihe ntanetị, adreesị MAC gị gbanwere ma Intanet agaghị adị gị.
Ị nwere ike ịga ụzọ abụọ: gwa onye ọrụ gị ọhụrụ adreesị MAC, ma ọ bụ ị nwere ike dị nnọọ ịgbanwe ya na rawụta ...
N'isiokwu a, m ga-achọ ịkọwa isi okwu ndị na-ebili n'oge usoro a (site n'ụzọ, ụfọdụ ndị na-akpọ ọrụ a "nkedo" ma ọ bụ "ịme" adreesị MAC).
1. Otu esi achọpụta adreesị MAC nke kaadị netwọk gị
Tupu ị kpaa ihe, ị kwesịrị ịma ihe ...
Ụzọ kachasị mfe iji chọpụta adreesị MAC bụ site na akara iwu, yana otu iwu dị mkpa.
1) Gbaa akara iwu ahụ. Na Windows 8: pịa Win + R, wee tinye CMD wee pịa Tinye.
2) Tinye "ipconfig / niile" wee pịa Tinye.
3) Ogosi njikọ netwọk kwesịrị igosi. Ọ bụrụ na mbụ ejikọrọ kọmputa ahụ (eriri USB si n'ọnụ ụzọ ejikọrọ na kaadị netwọk nke kọmpụta), mgbe ahụ, anyị kwesịrị ịchọta ihe onwunwe nke eriri Ethernet.
Njehie nke ihe "Adreesị Ahụhụ" ga-abụ MAC chọrọ anyị: "1C-75-08-48-3B-9E". A na-ede akwụkwọ a kacha mma na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ na ederede.
2. Esi gbanwee adreesị MAC na rawụta
Mbụ, gaa na ntọala nke rawụta.
1) Mepee nke ọ bụla n'ime ihe nchọgharị ahụ (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, wdg.) Ma tinye adreesị na-esonụ n'ime ebe nkwụsị: //192.168.1.1 (ọtụtụ mgbe adreesị ahụ bụ otu ihe ahụ; ị nwekwara ike ịchọta //192.168.0.1, // 192.168.10.1; dabere na ihe nlereanya nke onye nhazi gị).
Aha njirimara na paswọọdụ (ma ọ bụrụ na ọ bụghị gbanwere), na-abụkarị ndị a: Admin
Na D-link routers, ị nwere ike ịhapụ paswọọdụ (site na ndabara); na ZyXel routers, aha njirimara bụ admin, paswọọdụ bụ 1234.
2) Ihe ọzọ anyị nwere mmasị na tab WAN (nke pụtara netwọk zuru ụwa ọnụ, ya bụ Internet). Enwere ike inwe obere nghọtahie dị iche iche, mana akwụkwọ ozi atọ a na-adịkarị mgbe niile.
Dịka ọmụmaatụ, na redire D-njikọ DIR-615, ị nwere ike ịtọ adreesị MAC tupu ịhazi njikọ PPoE. A kọwawo nkọwa a n'ụzọ zuru ezu karị.
hazie redio D-njikọ DIR-615
Na ndị na-agagharị na ASUS, gaa na mpaghara "Njikọ Ịntanetị," họrọ tab "WAN" ma pịgaa na ala. A ga-enwe eriri iji kọwaa adreesị MAC. Enwetakwuo nkọwa ebe a.
ASUS router ntọala
Ihe dị mkpa! Ụfọdụ, mgbe ụfọdụ, jụọ ihe kpatara adreesị MAC adịghị abanye: ha na-ekwu, mgbe anyị pịa itinye (ma ọ bụ chekwaa), njehie na-apụta na data enweghị ike ịchekwa, wdg. Tinye adreesị MAC ga-abụ na mkpụrụedemede Latin na nọmba, na-abụkarị colon n'etiti ihe abụọ. Mgbe ụfọdụ, a na-ahapụ ya ka ọ banye n'ime nkwekọrịta (ma ọ bụghị n'ụdị ngwaọrụ niile).